Nintendo အဲ့အတွက် Code ကို Generator [3DS Wii DSI]
မင်္ဂလာပါ friends.Today ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အကောင်းသတင်းရှိသည် , ကျနော်တို့လက်စသတ် Nintendo အဲ့အတွက် Code ကို Generator.ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ် , သင်တို့အဘို့အန့်အသတ်ရမှတ်ကဒ် codes တွေကို generate နိုင်ပါ ကို Nintendo 3DS / က Wii / DSI.သုံးစွဲဖို့အလွန်လွယ်ကူသည် , ကိုယ့်အနည်းငယ်မျှနှိပ်ရုံနှင့်အတူရုံမိနစ်အနည်းငယ်အတွက်သင်တို့ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်သင့်ရဲ့ code.All ကို Download ပြေးဖို့ဖြစ်ပါတယ် generate နိုင်ပါ Nintendo အဲ့အတွက် Code ကို Generator , ရွေးချယ်ထားသောစနစ်က code ကိုကဒ် ( wii အချက်များ Card ကို, DSI စုံစမ်းမှုများ / 3DS အချက်များကိုကဒ်) , ကျပန်းစကား value.Then ကို click generate ကိုနှိပ်ပါ , မိနစ်အနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းနှင့်ယခုသင် code တွေကိုစုံစမ်းစေဘို့ Confirm / test.Wait click နှိပ်ပြီးသင့်ရဲ့ code တွေကိုရှိသည် button.Now code ကိုမျိုးပွားကိုကလစ်နှိပ်ပါ. အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသင်သည်ဤမီးစက်ကိုအသုံးပြုနိုင်ဖို့အားလုံးကိုညွှန်ကြားချက်များနှင့်အတူဗွီဒီယိုကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်.Nintendo အဲ့အတွက် Code ကို Generator ဖြစ် 100 % undetectabe နှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံ , အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီးအလွန် fast.We update ကိုအခါတိုင်းလိုသည်အလိုအလျှောက်ဤသူကားအ.Nintendo အဲ့အတွက် Code ကို Generator below.You ဒီမီးစက်အကြိမ်ပေါင်းများစွာသုံးနိုင်တယ် download လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်.
download Nintendo အဲ့အတွက် Code ကို Generator.rar
သင့်ရဲ့ system code ကိုကဒ်ကိုရွေးပါ( wii / DSI စုံစမ်းမှုများ / 3DS)
ကျပန်း Value ကိုကလစ်နှိပ်ပါ
Start Button ကို Generate ကိုကလစ်နှိပ်ပါ
ယခု Confirm / Test ကို Start Button ကို click နှိပ်ပါ
စောင့်ဆိုင်းနှိပ်ပါ Reproduce Code ကို button ကို
အခုသင့်ရဲ့ code တွေကိုရှိသည်
Wii အချက်များကိုကျပန်း Card ကိုကုဒ်များ Generate
Generate DSI စုံစမ်းမှုများ / 3DS ကိုကျပန်း Card ကိုကုဒ်များ Points
ကျွန်တော်တို့ဟာအောက်ဖော်ပြပါကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်သင်တို့သည်ငါတို့၏ generator.You ကိုအသုံးပြုကူညီဘို့အဗီဒီယိုတစ်ခုဖန်တီးခဲ့ကြ, ကျွန်တော်တို့ကို generate ဘယ်လိုမြင်ရပါလိမ့်မည် 2000 ဒီမီးစက်နှင့်အတူအချက်များကို .Enjoy